wararka maanta-arlaadii.net » Shabaab oo laba Ruux Ku Gowracay Gobolka Hiiraan
Masuliyiinta maamulka Buula-burde ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in Maleeshiyaad ka tirsan Mintidiinta ururka Al-shabaab ay laba dhalinyaro ah xalay ay ka afduubteen degaan lagu magacaabo Weylo-wad oo hoostaga magaaladaasi
Sidoo kale masuuliyiinta maamulka Buula-burde ayaa waxa ay sheegeen Shabaab in ay si xun u gawraceen labadan dhalinyarada ah, oo aan waxba galabsan.
Guddoomiyaha degmada Buulo-burde ee gobolka Hiiraan Cabdiraxmaan Daahri Guure oo la hadlay VOA-da ayaa waxa uu sheegay raggan la dilay in dhawaan ay yimaadeen magaalada Buula-burde, kadibna markii ay ku laabteen degaankooda la gawracay, si cabsi loogu abuuro shacabka.
Warar madax banaan ayaa sheegaya in raggan ay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda, balse warkaasi waxaa beeniyay Guddoomiyaha Buulo-burde oo sheegay in dhalinyaradan ay ahaayeen kuwo degaanka ah.
“Dhalinyaradan dadka degaanka ayay ahaayeen, maalmo kahor ayay yimaadeen Buulo-burde, dib ayay ugu laabteen degaanadooda oo Shabaab ay maamulaan, balse way gawraceen, si shacabka ay u qalqal geliyaan, raggan waxay ku eedeeyeen in ay qoranayeen ciidan.” Ayuu yiri Gudoomiyaha Buulo-burde.
Mareekanka oo Sheegay in ay Duqeymo ku Dileen Xubno Alshabaab ka Tirsan